धन भन्ने कि मन: यी बलिउड नायिकाहरुले गरे उमेर ढल्केका धनाड्यसँंग विवाह ! – Ramailo Sandesh
काठमाडौँ । बलिउडका कुनै समयका चर्चित नायिकाहरु अहिले परिवारिक जीवनमा ब्यस्त छन् । अहिले उनीहरुसँग नाम र दाम दुवै छ । तर उनीहरुले पैसाकै लागी आफुभन्दा बुढा पुरुषहरुसँग विवाह गरेका थिए । आज त्यस्तै ८ बलिउडका पैसाका लागी बुढो पनि नभनी विवाह गरेका अभिनेत्रीहरुको बारेमा कुरा गदै छौ । जसलाई पैसाकै लागी विवाह गरेको भनेर आरोप समेत लागेको थियो । हेरौ को को हुन् ?
अभिनेत्री तुलिप जोशी
तुलिप जोशीको जन्म मुम्बईमा ११ सेप्टेम्बर १९७९ मा भएको हो । उनको बुवा एक गुजराती भारतीय र आमा अमेनियन्स हुन् । उनले आफ्नो प्राथमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षा मुम्बईको जमनाबती नर्सी स्कुल बाट प्राप्त गरेकी हुन् । तर उनले आफ्नो विवाह ४५ वर्षीय बिजनेसम्यान क्याप्टन नायरसँग गरेकी थिइन् । उनले मेरे यार की शादी हे मा अभिनय गरेकी छिन् ।
सेलिना जेटलीको जन्म २४ नोभेम्बर १९८१ मा भएको थियो । उनी एक भारतीय अभिनेत्री हुन् जो मुख्य रूपले बलिउडमा अभिनय गर्ने गर्छिन । उनी भूतपूर्व सुन्दरी र मोडल हुन् । उनले सन् २००१ मा फेमिना मिस इन्डियाको उपाधि जितेकी थिइन् । पछि उनले पनि अस्ट्रियाका धनाड्य पीटर हगसँग विवाह गरेकी थिइन् । तर पछि उनले पैसाको लागी विवाह गरेको हल्ला चलेको थियो ।
बलिउडमा आफ्नो सुन्दरताले दिवान बनाएकी चर्चित अभिनेत्री आयशा टाकिया पनि धनाड्य फरहान आजमीसँग विवाह गरेकी थिइन । एक जानकारी अनुसार उनले पैसाको लागी बलिउड फिल्म क्षेत्र नै छोडेर फरहानसँग विवाह गरेको बताइन्छ । हाल उनी बलिउडबाट टाढा छिन् ।
बलिउडमा चर्चित अभिनेत्री जुही चावलाले पनि पैसाकै लागी जय मेहतासँग विवाह गरेको आरोप लागेको थियो । किनभने उनले आफुभन्दा धेरै उमेर बुढो जयसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री विद्या बालनले पनि धनाड्यसंग विवाह गरेकी थिइन् । उनको जीवनसाथी सिद्धार्थ राय कपुर हुन् । उनको पनि पैसाको लागी विवाह गरेको भन्दै हल्ला चलेको थियो ।
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टले पनि पैसाकै लागी आफुभन्दा धेरै वर्ष बुढो पुरुषसँग विवाह गरेको भनेर हल्ला चलेको थियो । त्यस्तै अमृता अरोरा लाई पनि त्यसै भनिन्छ ।